Ganacsigu wuxuu ku abaalmariyay $ 39 milyan si wax looga qabto hoy la'aanta iyadoo si deg deg ah loogu daray 307 hoy cusub iyo guryo taageeraya - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Ganacsigu wuxuu ku abaalmariyaa $ 39 milyan si wax looga qabto hoy la'aanta iyadoo si degdeg ah loogu daray 307 hoy cusub iyo guryo taageeraya
Shan mashruuc ayaa ka hela wejiga koowaad ee deeqaha barnaamijka Degdegga Guriyeynta ee Degdegga ah ee gobolka
OLYMPIA, WA - The Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington ayaa maanta ku dhawaaqday $ 39.1 milyan oo deeq ah shan mashruuc oo gacan ka geysan doona wax ka qabashada dhibaatada hoylaawe ee gobolka iyada oo la iibsanayo 307 guri oo si dhaqso ah loo heli doono si loogu adeego dadka dakhligoodu aad u hooseeyo ama ay la kulmaan hoy la’aan.
Dadka qaata deeqda waa:
Maamulka Guriyeynta Magaalada Vancouver - $ 5.1 milyan si loogu bixiyo 62 unug hoy oo ku yaal Bertha's Place ee Degmada Clark.
Gobolka King - $ 8.9 milyan si loogu bixiyo 84 unug hoy oo ku yaal Federal Way Red Lion Inn.
Machadka Guriyeynta Dakhliga Hoose - Saddex mashruuc oo ku yaal Degmada King:
$ 10.89 milyan oo loogu talagalay 69 unugyo guryeyn taageero joogto ah oo ku yaal 225 Harvard Apartments
$ 8.39 milyan oo loogu talagalay 58 unugyo guryeyn taageero joogto ah oo ku yaal Guryaha Boylston
$ 5.76 milyan oo loogu talagalay 34 unugyo guriyeyn taageero joogto ah 506 10th guryaha
Dhammaan mashaariicdu waxay leeyihiin maalgelin dheeraad ah oo laga helo ilo kale oo aan dawli ahayn. Faahfaahin mashruuc oo dheeraad ah ayaa la heli karaa halkan.
Kani waa wajigii koowaad ee abaalmarino laga helay barnaamij cusub oo Degdeg ah oo Guriyeynta Hantida oo ay maamusho Sanduuqa Kalsoonida Guriyeynta ee gobolka ee Ganacsiga. Miisaaniyadda raasamaalka ee gobolka 2021-23 waxay bixisaa ku dhawaad ​​$ 93.8 milyan si loo helo ama loo kireeyo hanti si degdeg ah loogu beddeli karo hoy degdeg ah oo horumarsan, guryo taageero joogto ah, guryo ku-meelgaar ah, guriyeyn dhallinyaro, guriyeyn joogto ah, xarumo ama hoy.
"Maalgelintaani waxay si dhakhso leh ugu dari doontaa unugyo aan u baahannahay si aan dad badan u hoyno maaddaama saameynta dhaqaale ee masiibada ay sii waddo adkeynta ilaha maxalliga ah," ayay tiri Agaasimaha Ganacsiga Lisa Brown.
Sanadkii 2020, bulshooyinka waxaa lagu qasbay inay yareeyaan awoodda ama ay xiraan gabbaadyada wadajirka masiibada darteed. Maaddaama dalabka qolalka huteelku uu hoos u dhacay oo qaar ka mid ah mashaariicda guryaha cusubi ay halis ku jireen, waxaa la kiraystay guryo hoy iyo helidda guryo joogto ah. Maalgashiyadani waxay gacan ka geysan doonaan sidii adeegyada hoylaaweyaashu u noqon lahaayeen kuwo adkaysi leh oo awood u leh inay dadka si joogto ah u degaan.
Maalgelinta wajiga koowaad waxay ku koobnayd ururada helaya guryaha awood u leh inay si deg deg ah u deggaan dadka, iyagoo cusboonaysiinaya ugu yaraan iyo caddaynta taageerada deegaanka. Laba fursadood oo maaliyadeed oo dheeraad ah ayaa soo raaca, iyada oo dalabka deeqda Wajiga Labaad la filayo inuu furmo 30 -ka Sebtembar lana xidho Noofambar 30, 2021. Wareegyadan maalgelinta ee xiga waxay filayaan waxqabadyo helitaan iyo dayactir dheeraad ah, iyada oo la filayo in unugyada guryuhu ku adeegi doonaan 90 ama 180 maalmood gudahood bilowga mashruuca. Faahfaahinta oo dhammaystiran ka akhri Ogeysiiska Fursadda Maalgelinta.
Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan dhammaan barnaamijyada Sanduuqa Trust Housing, booqo www.commerce.wa.gov/htf.
Hoy la’aanWar-saxaafadeedWasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington
← Fududeynta Madasha Sinaanta Dijital ah ee Gobolka Washington Wacyi -gelinta Bulshooyinka Dhibta Taariikhi ah →